त्रिविको परीक्षाफल निराशाजनक, साढे पाँच प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
मङ्गलबार १३ माघ, २०७७
गृहपृष्ठ » शिक्षा » त्रिविको परीक्षाफल निराशाजनक, साढे पाँच प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण
मङ्गलबार २० साउन, २०७७
काठमाडौ । त्रिवि कानून संकाय अन्तरगत सञ्चालित तीन वर्षे स्नातक तह (एल.एल.बी.) प्रथम वर्षको परीक्षामा पाँच प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको पाइएको छ ।
एल.एल.बी. २०७४ ब्याचको २०७५ सालमा प्रथम वर्षमा भर्ना भएका १४ हजार ८ सय ९८ विद्यार्थीहरुमध्ये १३ हजार १ सय ३७ विद्यार्थी गत वर्ष आषाढ र श्रावण महिनामा सञ्चालित परीक्षामा सहभागी भएका थिए । सो परीक्षाको गत श्रावण १६ गते प्रकाशित नतिजामा ७ सय २४ जना विद्यार्थीले मात्र नियमिततर्फ उत्तीर्ण गर्न सफल भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
जुन नतिजा कुल परीक्षामा सामेल विद्यार्थी संख्याको ५ दशमलब ५१ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ७ सय ६१ विद्यार्थी अर्थात ११ दशमलव ८२ प्रतिशत अनुपस्थित रहेका थिए भने ८८ दशमलब १८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु परीक्षामा सामेल भएका थिए ।
सबैभन्दा बढी १० हजार २ सय ४० विद्यार्थीहरु नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौमा भर्ना भएका थिए । जसमा ९ हजार १३ जनाले मात्र परीक्षामा सहभागिता जनाएकोमा ६ सय ५ जना मात्र उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् ।
यस्तैगरी महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराजमा भर्ना भएका १ हजार १ सय ४९ विद्यार्थीमध्ये १ हजार २ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । त्यसैगरी महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, नेपालगञ्जबाट १ हजार १ सय २८ जना विद्यार्थीमध्ये १ हजार १४ जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १० जनाले मात्र परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।
त्यस्तै १ हजार १८ जना विद्यार्थी भर्ना भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा ८ सय ९० जनाले परीक्षामा सहभागिता जनाउँदा १७ जनाले मात्र उत्तीर्ण गरेको पाइएको छ । उता बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएका ५ सय ७९ विद्यार्थीमध्ये परीक्षामा ५ सय १८ जना मात्र सामेल रहेका थिए भने नतिजामा २२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।
त्यस्तै पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा भर्ना भएका कुल ५ सय ७४ जनामध्ये ५ सय ३ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४९ जना पास भएका छन् । उता एकमात्र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस वीरगञ्जको हरिखेताङ सामुदायिक क्याम्पसबाट २१० जना विद्यार्थी भर्ना भएकोमा १९७ जनाले परीक्षा दिएका थिए भने १७ जना मात्र उत्तीर्ण हुन पुगेका छन् ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा निर्धारण गर्ने कि इच्छुक सबैले पढ्न पाउने भन्ने मुल विषयमा त्रिवि र विद्यार्थीहरुबीचको विवादका कारण एल.एल.बी. प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम २०७५ सालदेखि यता हुन सकेको छैन भने पटक पटक मिति घोषणा हुँदै भर्नाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा स्थगित हुँदै आएको छ ।
हुम्लाका विद्यालय माघ १५ देखि खुल्दै
दश महिनापछि सबै विद्यालय सञ्चालन
त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिदैँ
परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
त्रिविद्धारा परीक्षा आवेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्तै जरुरी सूचना प्रकाशित [सुचनासहित]
परीक्षा आवेदन भर्ने सम्बन्धी त्रिविको अत्यन्त जरुरी सुचना
त्रिविद्धारा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सुचना प्रकाशित [सुचनासहित]
विश्वविद्यालयमा आजदेखि पठनपाठन शुरु
भारतीय राजदूताबासद्धारा छात्रवृत्ति योजनाका लागि अनलाइन आवेदन आह्वान
त्रिविको गर्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुचना प्रकाशित [सुचनासहित]
अन्तिम समयमा आएर त्रिविद्धारा परीक्षा तालिका परिवर्तन [ सूचनासहित ]
माघ १५ बाट विद्यालय सञ्चालनमा आउने
काभ्रेको मंगलटारमा बम विष्फोट
बसपार्कको लजमा बसेका देवर–भाउजूको मृत्यु
सिक्किममा भारत–चीनका सैनिकबीच हात हालाहाल, २४ गम्भीर घाइते